ARSA အကြမ်းဖက်အုပ်စုအား ရှင်းလင်းချေမှုန်းနိုင်ရေး မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ ၀င်များ အလံတင်အစည်းအဝေးပြုလုပ် - People Media Myanmar
Home ARSA အကြမ်းဖက်အုပ်စုအား ရှင်းလင်းချေမှုန်းနိုင်ရေး မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ ၀င်များ အလံတင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ARSA အကြမ်းဖက်အုပ်စုအား ရှင်းလင်းချေမှုန်းနိုင်ရေး မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ ၀င်များ အလံတင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ARSA အကြမ်းဖက်အုပ်စုအား ရှင်းလင်းချေမှုန်းနိုင်ရေး မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ များ၏ တပ်ရင်းမှူးအဆင့် အလံတင်အစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ မောင်တောမြို့၊ အမှတ်(၁) လူဝင်/ ထွက်စစ်ဆေးရေးစခန်း (POE) တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ပိုင်နက်ကို အသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေသည့် ARSA အကြမ်းဖက်အုပ်စုအားနှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ရှင်းလင်းချေမှုန်းနိုင်ရေး၊ နယ်စပ်တွင် ထူးခြားဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်မှုများနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ ကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဆက်သွယ်ပေးပို့ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ၉ ဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ ငါးဖမ်းစက်လှေဖြင့် တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာမှုကို နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်များနှင့်အညီ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများဖြစ်၍ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာများအားလေးစားလိုက်နာသောအားဖြင့် စနစ်တကျ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ ၉ ဦးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိလှေများ/ ပါရှိပစ္စည်းများကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် ARSA အကြမ်းဖက်အုပ်စုသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်တွင် အခြေပြုလှုပ်ရှား၍ မြန်မာ့လုံခြုံရေး အဖွဲ့များအားအလစ်အငိုက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ARSA အကြမ်းဖက်အုပ်စု၏ မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲမှုကြောင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် မောင်တောမြို့နယ်၊ လိပ်ရကျေးရွာအနီးအရပ်သား ပိုင် မော်တော်ယာဉ် ၁ စီးမိုင်းထိ၍ ကလေးငယ်များအပါအဝင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၃ ဦးသေဆုံးပြီး ၆ ဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့မှုအခြေအနေအား Video Clip နှင့် ဓာတ်ပုံများပြသ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးအနီးလာရောက် ပစ်ခတ်မှုများ၊ မိုင်းထောင်သည့်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
အလားတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၉ ဦးပြန် လည်လွှဲပြောင်းပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်ခြားစောင့်တပ်အနေဖြင့်လည်း နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတို့တွင် အကောင်းဆုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်သတင်းများရရှိပါက ဖလှယ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာဘက်မှ ဆွေးနွေးပြောကြားချက်များကို အထက်တာဝန်ရှိသူများထံ ဆက်လက်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ်ပြောကြားခဲ့သည်။
အလံတင်အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ၏ တပ်ရင်းမှူးအဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အမှတ်(၄)နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးဒုတိယ ရဲမှူးကြီးဇော်လင်းအောင်ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ် ၇ ဦးနှင့် အမှတ်(၂) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်ခြားစောင့်တပ်(တက္ကနာ့ဖ်)မှ တပ်ရင်းမှူး Lt.Col. Mohammad Faisal Hasan Khan ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် ၁၀ ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ARSA အကွမျးဖကျအုပျစုအား ရှငျးလငျးခမြှေုနျးနိုငျရေး မွနျမာ-ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နှဈနိုငျငံနယျခွားစောငျ့ တပျဖှဲ့ ဝငျမြား အလံတငျအစညျးအဝေးပွုလုပျ
ARSA အကွမျးဖကျအုပျစုအား ရှငျးလငျးခမြှေုနျးနိုငျရေး မွနျမာ-ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နှဈနိုငျငံနယျခွားစောငျ့ တပျဖှဲ့ မြား၏ တပျရငျးမှူးအဆငျ့ အလံတငျအစညျးအဝေးကို မွနျမာနိုငျငံ၊ မောငျတောမွို့၊ အမှတျ(၁) လူဝငျ/ ထှကျစဈဆေးရေးစခနျး (POE) တှငျ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ ၂၅ ရကျ နံနကျ ၁၁ နာရီခှဲတှငျ ပွုလုပျခဲ့သညျ။
အဆိုပါအစညျးအဝေးတှငျ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ ပိုငျနကျကို အသုံးပွုတိုကျခိုကျနသေညျ့ ARSA အကွမျးဖကျအုပျစုအားနှဈနိုငျငံနယျခွားစောငျ့တပျဖှဲ့မြား၏ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုဖွငျ့ ရှငျးလငျးခမြှေုနျးနိုငျရေး၊ နယျစပျတှငျ ထူးခွားဖွဈစဉျ ဖွဈပျေါမှုမြားနှငျ့ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြား ကိုခွိမျးခွောကျခွငျး၊ မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျခွငျးတို့မှ ကာကှယျတားဆီးနိုငျရေးအတှကျ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို အခြိနျနှငျ့တဈပွေးညီဆကျသှယျပေးပို့ရေးတို့ကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ဆကျလကျပွီး လကျရှိဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံသား ၉ ဦးသညျ မွနျမာနိုငျငံနယျနိမိတျအတှငျးသို့ ငါးဖမျးစကျလှဖွေငျ့ တရားမဝငျ ဝငျရောကျလာမှုကို နှဈနိုငျငံသဘောတူစာခြုပျမြားနှငျ့အညီ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားမှု၊ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြားဖွဈ၍ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာမြားအားလေးစားလိုကျနာသောအားဖွငျ့ စနဈတကြ ပွနျလညျလှဲပွောငျးပေးခွငျးဖွဈကွောငျးမြား ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ ၉ ဦးနှငျ့အတူ ဖမျးဆီးရမိလှမြေား/ ပါရှိပစ်စညျးမြားကိုပွနျလညျလှဲပွောငျးပေးအပျခဲ့ကွောငျး ပါရှိသညျ။
ထို့အပွငျ ARSA အကွမျးဖကျအုပျစုသညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဘကျတှငျ အခွပွေုလှုပျရှား၍ မွနျမာ့လုံခွုံရေး အဖှဲ့မြားအားအလဈအငိုကျ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ARSA အကွမျးဖကျအုပျစု၏ မိုငျးထောငျဖောကျခှဲမှုကွောငျ့ နိုဝငျဘာလ ၁၇ ရကျနတှေ့ငျ မောငျတောမွို့နယျ၊ လိပျရကြေးရှာအနီးအရပျသား ပိုငျ မျောတျောယာဉျ ၁ စီးမိုငျးထိ၍ ကလေးငယျမြားအပါအဝငျ အပွဈမဲ့ပွညျသူ ၃ ဦးသဆေုံးပွီး ၆ ဦးဒဏျရာ ရရှိခဲ့မှုအခွအေနအေား Video Clip နှငျ့ ဓာတျပုံမြားပွသ၍ ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး နယျစပျခွံစညျးရိုးအနီးလာရောကျ ပဈခတျမှုမြား၊ မိုငျးထောငျသညျ့ဖွဈစဉျမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးအခကျြအလကျမြားဖလှယျ ဆှေးနှေး ခဲ့ကွသညျ။
အလားတူ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျမှလညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံသား ၉ ဦးပွနျ လညျလှဲပွောငျးပေးမှုကို ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နယျခွားစောငျ့တပျအနဖွေငျ့လညျး နယျစပျဒသေလုံခွုံရေးနှငျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးတို့တှငျ အကောငျးဆုံးပူးပေါငျး ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး၊ အကွမျးဖကျသတငျးမြားရရှိပါက ဖလှယျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ မွနျမာဘကျမှ ဆှေးနှေးပွောကွားခကျြမြားကို အထကျတာဝနျရှိသူမြားထံ ဆကျလကျတငျပွမညျဖွဈကွောငျး တှဆေုံ့ ဆှေးနှေးစဉျပွောကွားခဲ့သညျ။
အလံတငျအစညျးအဝေးသို့ မွနျမာ-ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နယျခွားစောငျ့တပျဖှဲ့မြား၏ တပျရငျးမှူးအဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့၊ အမှတျ(၄)နယျခွားစောငျ့ရဲတပျဖှဲ့ခှဲမှူးဒုတိယ ရဲမှူးကွီးဇျောလငျးအောငျဦးဆောငျသော ကိုယျစား လှယျ ၇ ဦးနှငျ့ အမှတျ(၂) ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နယျခွားစောငျ့တပျ(တက်ကနာ့ဖျ)မှ တပျရငျးမှူး Lt.Col. Mohammad Faisal Hasan Khan ဦးဆောငျသောကိုယျစားလှယျ ၁၀ ဦးပါဝငျသောအဖှဲ့တို့ တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
« COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ရရှိလာပါက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အသက်အရွယ်ကြီးပြီး ရောဂါအခံရှိသူများ ကို ဦးစားပေးထိုးနှံသွားမည်
ဘေကျင်းမြို့ ပင်လယ်စာဈေးတွင် အေးခဲအသားများ ရောင်းဝယ်သိုလှောင်မှုရပ်ဆိုင်းထား »